SEARCH ANAGHỊ ARỤ ỌRỤ NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Search anaghị arụ ọrụ na Windows 7
Imirikiti ndị ọrụ na-eji mechie kọmputa ha site na iji menu Malite. Ọ bụrụ na ha nụ banyere ohere ime nke a site na akara iwu ahụ, ha anaghị anwa iji ya mee ihe. Ihe a nile bụ n'ihi ajọ mbunobi na ọ bụ ihe dị mgbagwoju anya, maka ndị ọkachamara n'ọhịa nke nkà na ụzụ kọmputa. Ka ọ dị ugbu a, iji usoro iwu ahụ dị mfe ma nye onye ọrụ ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
Gbanyụọ kọmputa ahụ site na akara iwu ahụ
Iji gbanyụọ kọmputa site na iji akara iwu, onye ọrụ kwesịrị ịma ihe abụọ dị mkpa:
Otu esi akpọ akara iwu;
Kedu iwu iji gbanyụọ kọmputa.
Ka anyi buru ihe ndi ozo n'ikwu ihe kariri.
Oku akara iwu
Kpọọ akara iwu ma ọ bụ dịka a na-akpọ ya, njikwa, na Windows dị mfe. A na-eme nke a na nzọụkwụ abụọ:
Jiri ụzọ mkpirisi keyboard Nweta + R.
Na windo na-egosi, pịnyere cmd ma pịa "OK".
Ihe omume ndị a ga - emepe window windo. Ọ na-ele anya maka otu maka nsụgharị Windows niile.
Ị nwere ike ịkpọ console na Windows na ụzọ ndị ọzọ, ma ha niile dị mgbagwoju anya ma nwee ike iche na nsụgharị dị iche iche nke sistemụ. Usoro a kọwara n'elu bụ nke kachasị mfe na nke ụwa dum.
Nhọrọ 1: Ịkwụsị kọmputa na mpaghara ahụ
Iji gbanyụọ kọmputa site na iwu ahụ, jiri iwu ahụmechie. Mana ọ bụrụ na ịpịnye ya na njikwa, kọmputa agaghị agbanyụ. Kama nke ahụ, enyere aka na iji iwu a ga-egosipụta.
N'ịbụ onye ji nlezianya mụọ enyemaka ahụ, onye ọrụ ga-aghọta na iji gbanyụọ kọmputa ahụ, ị ​​ga-eji iwu ahụ mechie na oke [s]. Igodo ahịrị n'ime njikwa ahụ kwesịrị ịdị ka nke a:
mechie / s
Mgbe mmeghe ya, pịa igodo Tinye ma malite usoro usoro mmechi.
Nhọrọ 2: Jiri Timer
Ịbanye iwu njikwa mechie / s, onye ọrụ ahụ ga-ahụ na mmechi nke kọmputa ahụ ka dịbeghị, mana kama ịdọ aka ná ntị na-egosi na ihuenyo ahụ ga-agbanyụrịrị mgbe nkeji. N'ihi ya, ọ dị ka Windows 10:
Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na oge nkwụsị oge ahụ dị na iwu a site na ndabara.
Maka ikpe mgbe kọmputa ga-agbanyụ ozugbo, ma ọ bụ n'oge dị iche iche, na iwu ahụ mechie a na-enye parameter [t]. Mgbe mmeghe nke oke a, ị ga-ezipụta oge etiti na sekọnd. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanyụọ kọmputa ahụ ozugbo, a na-edozi uru ya na zero.
Na ihe atụ a, a ga-agbanyụ kọmputa ahụ mgbe nkeji 5 gachara.
A ga-egosipụta ozi nkwụsịtụ na ihuenyo, dịka ọ dị na iji iwu na-enweghị oge.
A ga-emeghachi ozi a ugboro ugboro, na-egosi oge fọdụrụ tupu i mechie kọmputa ahụ.
Nhọrọ 3: Ikwusi kọmputa di n'ime
Otu n'ime uru nke imechi kọmputa site na iji akara iwu bụ na n'ụzọ dị otú a, ị nwere ike gbanyụọ ọ bụghị naanị obodo ahụ kamakwa kọmputa dịpụrụ adịpụ. Maka otu a mechie a na-enye parameter [m].
Mgbe iji oke a, ọ bụ iwu na ị ga-ezipụta aha netwọk nke kọmputa dịpụrụ adịpụ, ma ọ bụ adreesị IP ya. Ụdị usoro iwu dị ka nke a:
mechie / s / m 192.168.1.5
Dị ka ọ dị na kọmpụta mpaghara, ịnwere ike iji oge iji mechie igwe di n'ime. Iji mee nke a, gbakwunye paramita kwekọrọ na iwu ahụ. Na ihe atụ dị n'okpuru ebe a, a ga-agbanyụ kọmputa dị na kọmputa mgbe nkeji ise gachara.
Iji mechie kọmputa na netwọk, a ghaghị ikwe ka njikwa na ya, onye ọrụ nke ga-arụ ọrụ a aghaghị inwe ikike nchịkwa.
Hụkwa: Otu esi jikọọ na kọmputa dịpụrụ adịpụ
N'ịtụle usoro nke imechi kọmputa site na iwu ahụ, ọ dị mfe ịhụ na nke a abụghị usoro mgbagwoju anya. Tụkwasị na nke a, usoro a na-enye onye ọrụ ihe ndị ọzọ na-efu mgbe ha na-eji usoro atumatu.